Maxaad kala socotaa Kaluumaysada Thailand ee kuxayiran xeebta Bosaaso? (Akhriso) – Radio Daljir
Agoosto 7, 2019 11:29 b 0
Kaluumaysato udhalatay dalka Thailand oo tiradooda ay gaarayso 50 qof ayaa ku xayiran dooni Kalluumeysi oo lagu magacaabo Waddani 1,taas oo taagan meel ka baxsan Xeebta magaalladda Bosaaso isla markaana ay gabaabsi ka tahay Cuntadii iyo Biyahii u saarnaa Doonida.
Kaluumaysatadan ayaa u shaqaynayay ganacsade Soomaaliyeed, waxayna sheegeen in mudo 8bilood ah aysan qaadan wax mushahar ah uuna udheera dayac iyo darxumo.
Warbaahinta caalamka ayaa aad wax uga qoray xaalada kaluumaysatadan ay ku sugan yihiin kaadib markii mid ka mid ah Kalluumeysatadaasi oo saaran Doonida Waddani 1 uu Wicitaan Muuqaal leh ku sheegay inay xaallad khatar ah ku jiraan.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee dalka Thailand, Busadee Santipitaks ayaa sheegay in ay Kalluumeystadaasi isbuuca soo socda dib loogu soo celin doono dalkooda hooyo, isla markaana loo diyaariyey Tikidhada Diyaaradii ay soo raaci lahaayeen.
waxa uu sheegay in dowladda Puntland Puntland ay xaqiijisay Ambabaxa Kalluumeysatadaasi, loona fududeynayo wixii Tas-hiilaad ah si ay ugu laabtaan dalkodoa hooyo.
Wasiirka Kaluumaysiga Puntland Faarax Cawaash oo ay Daljir la xiriirtay si ay arimahan wax uga waydiiso ayaa sheegay in uusan hada diyaar u ahayn in uu ka hadlo maadaama uu safar ku soojiro.
Madaxweyne Muuse Biixi“Col. Caarre waa dambiile Qaran”